Mpanamboatra sy mpamatsy famolavolana sary - Tetikasa China Design Drawing Design
Fampidirana Villa: fanitarana mety indrindra amin'ny trano itoeran'ny fianakaviana izy ary mitovy hevitra amin'ny haitraitra, avo lenta, fiainana manokana ary harena. Toeram-ponenana an-jaridaina naorina ao amin'ny tanàna manodidina na toerana mahafinaritra hahasitranana azy io. Toerana hankafizana fiainana io. Fantatra amin'ny ankapobeny fa, ankoatry ny fiasa fototra amin'ny "fiainana" amin'ny maha-fonenana azy, ny fonenana avo lenta, dia hita taratra indrindra ny kalitaon'ny fiainana sy ny toetra mampiavaka ny fahafinaretana, ary ny fonenana tsy miankina zaridaina ao amin'ny meani maoderina .. .
Fampidirana Herin-teknika an'ny orinasa: manana endrika 7 ny orinasa, mpamorona firafitra 3, mpamorona mari-trano 2 ary mpamorona rano sy herinaratra 1, ny telo amin'izy ireo dia niasa tao amin'ny institiota famoronana nandritra ny 3 taona mahery. Amin'ny indostria matihanina mifanaraka amin'izany, ny androm-piainan'ny mpamorona farafahakeliny dia dimy taona, ary ny androm-piainan'ny mpiasa farany ambony dia nahatratra 13 taona. Ny famolavolana ny firafitry ny vy dia misy: (tranobe birao, hotely, trano fandraisam-bahiny) sy ny frame hafa ...